SP-L10M SOICARE 400ml osisi ọka nnukwu alụlụ ultrasonic Aromatherapy whit Bluetooth ọkà okwu mkpa mmanụ diffuser, China SP-L10M SOICARE 400ml osisi ọka nnukwu alụlụ ultrasonic Aromatherapy whit Bluetooth ọkà okwu mkpa mmanụ diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-L10M SOICARE 400ml osisi ọka nnukwu alụlụ ultrasonic Aromatherapy whit Bluetooth ọkà okwu mkpa mmanụ diffuser
SOICARE 400ml osisi ọka nnukwu alụlụ ultrasonic Aromatherapy whit Bluetooth ọkà okwu mkpa mmanụ diffuser
· [Ikuku App Control & V4.2 Bluetooth Ọkà okwu]: Aromatherapy diffuser dị ọsọ ma kwụsie ike iji jikọọ bluetooth ekwentị n'ime 13ft. Ọ na-abịa site na ụda stereophonic dị elu & oke olu gburugburu jupụta n'ime ụlọ. Ntọala oge, njikwa alụlụ, egwu egwu, njikwa ọkụ na ngwa ahụ. Enwere ike iji igwe okwu iche iche. Android Kwekọrọ n'Ozizi na gam akporo 4.3+, iOS 4.0+ (Kwado ụdị ekwentị niile ma e wezụga Google ekwentị) iOS kwesịrị ịgbanye Bluetooth & jikọọ onye mgbasa ozi ahụ tupu ibudata 'Aromalife' APP.
· [400ml Nnukwu ikike na ọrụ ọtụtụ]: Aroma diffuser na humidifier dual function, ị nwere ike itinye obere tụlee nke mmanụ dị mkpa na mmiri, mgbe sekọnd ole na ole ga-ejupụta na isi nke mmanụ dị mkpa. Nchedo gburugburu ebe obibi PP tank tank, na-egbochi mmebi nke mmanụ dị mkpa na inogide. Onye a na-ekesa ihe na-esi ísì ụtọ nwere ike ịnwụ ruo awa 10 site na iji ikike mmiri nke 400ml. Anakwere ultrasonic technology, a diffuser bụ nnọọ jụụ mgbe na-arụ ọrụ.
· [Njikwa ọkụ]: Wood ọka Isi na oghere ifuru osisi vaịn nkpuchi, ọkụ na-ebili alụlụ na-eme ka ị na-eche dị ka ị na-mgbe na a ebube dị ebube nrọ ubi. Enwere ike ịmegharị agba ma ọ bụ tọọ ya na otu agba edozi. pụrụ iche gburugburu ihuenyo mmetụ interface, mfe enịm ke ngwa, ị ga-kpam kpam ga-agba izute gị dị iche iche mkpa.
· [Ultrasonic Jụụ alụlụsị Diffuser]: ịgba ahụ dị nro ma dịkwa nro, na-eme ka nchekwa dịkwuo mma ma na-eme ka isi nke mmanụ dị mkpa n'onwe ya rụọ ọrụ ma gbasaa nke ọma. Ọrụ Nchekwa onwe-mmiri na-enweghị mmiri, Ozugbo mmiri gwụchara, onye na-ekesa ihe ga-emechi ozugbo. Enweghị eji ọkụ, mee ya nchekwa maka ụmụaka na anụ ụlọ.
· [Onyinye zuru oke]: Imejuputa aromatherapy nwere ike belata nchekasị na ịda mba, meziwanye ndụ na ihi ụra. Nke a aromatherapy mkpa mmanụ diffuser atụmatụ a ibu oge a osisi ọka, dị ka a ji achọ mpempe. Njikwa ngwa ngwa, ọkụ na-acha ọkụ. Zuru oke maka Ndị nwoke na ndị nwanyị nọ n'ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmahịa. Ọ bụ ezigbo nhọrọ iji nke a ọmarịcha diffuser dị ka onyinye ndị enyi gị na ndị ezinụlọ, ndị hụrụ.
Ejiri mkpuchi na-akpọ Humidifier
Auto ike-apụ mgbe enweghị mmiri
Igwe okwu Bluetooth, humidifier, aromatherapy
Ogo igbe agba:
SP-G09 SOICARE 200ml seramiiki achara aromatherapy Mkpa Oil Diffuser
SOICARE 4L Nnukwu ikike Ultrasonic Air Humidifier